प्रधानमन्त्री देउवाले बनाउने सचिवालयमा नयाँ र पुराना अनुहार आउदै, कुन क्षेत्रबाट को ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रधानमन्त्री देउवाले बनाउने सचिवालयमा नयाँ र पुराना अनुहार आउदै, कुन क्षेत्रबाट को ?
प्रधानमन्त्री देउवाले कम्तिमा १७ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकारले कसरी काम गर्ला हेर्न उनले कस्तो सचिवालय बनाउँदैछन् भन्ने हेर्नुपर्छ । देउवाले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएको सचिवालय टिमलाई नै फेरि सचिवालयमा ल्याउँदैछन्
२०७८ श्रावण १२, मंगलवार १९:१२:००
काठमाडाैँ। कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ भन्ने अनुमान गर्न उसले कस्तो सचिवालय बनाउँछ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सवालमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । हरेक कार्यकालमा विवादित बनेर पनि देउवाले पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्न सौभाग्य पाएका छन् ।
तिनै प्रधानमन्त्री देउवाले कम्तिमा १७ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकारले कसरी काम गर्ला हेर्न उनले कस्तो सचिवालय बनाउँदैछन् भन्ने हेर्नुपर्छ । देउवाले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएको सचिवालय टिमलाई नै फेरि सचिवालयमा ल्याउँदैछन् ।
प्रधानमन्त्री भएको २ हप्ता पुग्नै लाग्दा पनि देउवाले औपचारिक रुपमा सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन् । मुख्य गरी सत्तारुढ दलसँगको वार्ता र संवादका लागि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देउवालाई सपोर्ट गरिरहेका थिए । तर उनी पनि पछिल्लो केही दिनयता असन्तुष्ट छन् । यस अघिदेखि नै स्वकीय सचिव भएका भानु देउवाले नियमित काम गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले देउवाले अहिलेसम्म आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा एक जना पनि नियुक्ति नगरेको जनाएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कोही नियुक्त हुनुभएको छैन तर तयारी छ ।’ उनले एक÷दुई दिनमै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय नियुक्त हुने बताए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टिममा सामेल हुने केही अनुहारहरु निश्चित भएका छन् । उक्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा भतिजा भानु देउवा नै दोहोरिंदैछन् ।भतिजा भानु प्रधानमन्त्री देउवाका सबैभन्दा नजिकका विश्वासिला पात्र पनि हुन् । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नहुँदा पनि भानु नै उनको प्रमुख स्वकीय सचिव भएर काम गरेका थिए । भानुले प्रमुख स्वकीयको रुपमा सिंहदरबारमा गएर काम गर्न थालिसकेका छन् । तर औपचारिक नियुक्ति भने दिइएको छैन ।
स्वकीय सचिवमा थापाको चर्चा
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो स्वकीय सचिवमा पनि पुरानै अनुहार दोहोर्याउँदै छन् । यसअघिको कार्यकालमा स्वकीय सचिव रहेका विरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको रुपमा काम थालिसकेका छन् । थापाले देउवा प्रधानमन्त्री हुनुअघि पनि उनको टिममा बसेर काम गर्दै आएका थिए । उनको पनि देउवाको स्वकीय सचिवमा नियुक्ति भएको छैन तर काम भने शुरु गरिसकेका छन् ।
प्रेस संयोजकमा गोविन्द परियार
गोविन्द परियारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवासँग बसेर प्रेस संयोजकको भूमिका निभाइसकेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि उनले मिडियासम्बन्धी सहयोग गर्दै आएका थिए । परियारले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रेस संयोजकको रुपमा काम थालिसकेका छन् । त्यही भूमिकाका लागि परियारले आफू संलग्न रहेको काठमाडौँ प्रेस अनलाइनबाट पनि एक हप्ता अघि नै राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकको लागि चर्चामा रहेका अर्का व्यक्तिमा बद्रि सिग्देल पनि छन् । प्रेस युनियनका अध्यक्ष भइसकेका सिग्देल यस अघि पनि दाबेदार थिए ।
परराष्ट्र सल्लाहकारमा दिनेश भट्टराई र गेजा शर्माको नाम चर्चामा छ । यस अघि काम गरिसकेका भट्टर्राले फेरि दोहोरिने इच्छा देखाएका छन् । तर चर्चामा शर्मा पनि छन् ।
आर्थिक सल्लाहकारमा विश्व पौडेलको नाम चर्चामा छ । तर योजना आयोगको सदस्यमा पनि इच्छुक रहेको बताइन्छ । यद्यपी आर्थिक मामिलामा पौडेलले देउवालाई सहजीकरण गरिरहेको बुझिएको छ । यस अघि योजना आयोगमा सदस्य भइसकेका डा. प्रभु बुढाथोकीले यसपटक आयोगको प्रमुखमा दाबी गरेको बताइन्छ ।
विभिन्न सल्लाहकारमा दाबेदारहरुको दाबेदारी भए पनि के–के सल्लाहकार राख्ने भन्ने टुंगो देउवाले लगाइसकेका छैनन् । उनी आन्तरिक छलफलमै भएको बुझिन्छ । तर, समयमा सचिवालय मात्र होइन मन्त्रिहरु चयन नगरेकोमा समेत प्रधानमन्त्री निकट नेताहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सचिवालय बनाउने प्रधानमन्त्रीको निजी विषय भए पनि सामान्य संवादसमेत नभएको भन्दै आलोचनको क्रम बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र नेता पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक संजालमा लेख्दै संघ र प्रदेशमा भएको मन्त्री चयनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।